Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah - 802Quits
Bogga ugu weyn » Vermonters » Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah
Waad ku mahadsantahay booqashada 802Quits.org iyo dib u eegida siyaasadeena asturnaanta. Macluumaadka aan helno waxay kuxirantahay waxaad sameyso markaad booqato bartayada. Nuxurka siyaasadeena asturnaanta waa mid fudud oo cad: ma ururin doonno macluumaad shaqsiyadeed oo adiga kugu saabsan markii aad booqato degelkeenna illaa aad si ikhtiyaari ah u doorato inaad na siiso macluumaadkaas, tusaale ahaan, adoo galaya macluumaadka foomka ikhtiyaariga ah ee khadka tooska ah ama noo soo diraya iimayl
Waa tan sida aan ula macaamileyno macluumaadka ku saabsan booqashadaada websaydhka:
Haddii aadan waxba qaban muddada booqashadaada laakiin aad ka dhex baahato bogga internetka, akhriso bogagga, ama soo degsato macluumaadka, waan soo ururin doonnaa oo keydin doonnaa macluumaadka qaarkood ee ku saabsan booqashadaada si otomaatig ah. Softiweerka biraawsarkaaga ayaa inta badan macluumaadkan noo soo gudbiya. Macluumaadkani shaqsi ahaan kuuma aqoonsan doono.
Waxaan si otomaatig ah u ururineynaa oo aan kaydinaynaa kaliya macluumaadka soo socda ee ku saabsan booqashadaada:
Cinwaanka IP-ga ee lambarka ah (cinwaanka IP-gu waa lambar si otomaatig ah loogu qoondeeyo kombuyuutarkaaga markasta oo aad ka faafineyso Webka) oo aad ka soo gasho bogga 802Quits.org Barnaamijkeena wuxuu markaa khariidayn karaa cinwaanadan IP-ga ah magacyada domainka ee internetka, tusaale ahaan, “xcompany.com” haddii aad isticmaasho koonto internet gaar loo leeyahay, ama “yourschool.edu” haddii aad ku xirmato bogga jaamacadda.
Nooca biraawsarka iyo nidaamka hawlgalka ee loo adeegsado in lagu galo websaydhka 802Quits.org.
Taariikhda iyo waqtiga aad gasho 802Quits.org.
Bogagga aad booqatay, oo ay ku jiraan sawirro laga soo raray bog kasta iyo dukumiintiyo kale oo aad soo dejiso, sida faylasha PDF (Qaab Dukumenti Qaadan kara) iyo dukumiintiyada habeynta ereyada
Haddii aad ku xirtay 802Quits.org degel kale, cinwaanka degelkaas. Softiweerka biraawsarkaaga ayaa macluumaadkan noo soo gudbinaya.
Waxaan u isticmaalnaa macluumaadkan si ay nooga caawiso inaan ka dhigno boggeena mid waxtar u leh dadka soo booqda - si aan wax uga ogaano tirada dadka soo booqda bartayada iyo noocyada tikniyoolajiyadda ay booqdayaashu adeegsadaan. Kama daba galno mana diiwaan galino macluumaadka ku saabsan shaqsiyaadka iyo booqashooyinkooda.
Cookie waa feyl yar oo qoraal ah oo degelku ku dhejin karo mashiinka adag ee kumbuyuutarkaaga, tusaale ahaan, si uu u soo ururiyo macluumaadka ku saabsan waxqabadyadaada goobta ama inuu kuu suuro geliyo inaad isticmaasho gaari-ka-adeegashada internetka si aad ula socoto waxyaabaha aad rabto inaad iibsato. Cookie-ku wuxuu macluumaadkaan dib ugu gudbinayaa kombuyuutarka websaydhka kaasoo, guud ahaan hadlaa, uu yahay kombiyuutarka kaliya ee akhrin kara. Macaamiisha badankood ma oga in cookies-ka lagu dhejinayo kombuyuutarkooda markay booqdaan boggaga internetka. Haddii aad rabto inaad ogaato markay taasi dhacdo, ama inaad ka hortagto inay dhacdo, waxaad dejin kartaa biraawsarkaaga si uu kaaga digo marka websaydhku isku dayo inuu cookie ku dhejiyo kombuyuutarkaaga.
Waxaan ka niyad jabineynaa isticmaalka cookies-ka websaydhka boggeena. Kukiyada ku meelgaarka ah, si kastaba ha noqotee, waa la isticmaali karaa markii loo baahdo si loo dhammeeyo macaamil ganacsi ama kor loogu qaado waayo-aragnimada isticmaale ee isticmaalka goobta.
Foomamka Email iyo Online
Haddii aad dooratid inaad iskaa u aqoonsatid adoo noo soo diraya emayl ama adoo adeegsanaya foomamkeena internetka - sida markii aad codsato qalabka iska joojinta bilaashka ah; u dir emayl maamulaha goobta ama qof kale; ama adiga oo ku buuxiya foom kale macluumaadkaaga qaaska ah oo aad noogu soo gudbiso boggayaga internetka - waxaan u isticmaalnaa macluumaadkaas si aan uga jawaabno fariintaada iyo inaad naga caawiso inaan kaa helno macluumaadka aad codsatay. Waxaan ula dhaqannaa e-mayl si lamid ah sida aan ula dhaqanno waraaqaha loo diro 802Quits.org.
802Quits.org uma uruuriso macluumaadka suuqgeynta ganacsiga. Kama iibin doonno ama ka kirayn doonno macluumaadkaaga shaqsiyeed lagu aqoonsan karo cidna.
E-maylka ka sokoow, 802Quits.org ayaa laga yaabaa inay ku weydiiso macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed si ay uga baaraandegto codsiyada iyo amarrada laga heli karo 802Quits.org. Tusaalooyinka waxaa ka mid ah:
Codsiga qalabka joojinta bilaashka ah
Dhamaan howlahaani waa iskaa wax u qabso. Waxaad had iyo jeer heli doontaa ikhtiyaarka ah inaad fuliso codsiga oo aad bixiso macluumaadkan.
Xidhiidhka goobaha kale
Websaydhka 802Quits.org wuxuu ka kooban yahay xiriiriyeyaal hay'adaha kale ee gobolka iyo ilaha kale ee dadweynaha ama federaalka. Xaalado dhawr ah, waxaannu kula xiriirnaa ururro gaar loo leeyahay oggolaanshahooda. Markaad ku xiranto degel kale, waxaad ku xiran tahay siyaasadda asturnaanta ee bogga cusub.
Waxaan si dhab ah u tixgelinaynaa sharafta macluumaadka iyo nidaamyada aan ilaalino. Sidan oo kale, waxaan u diyaarinay tallaabooyin amni dhammaan nidaamyada macluumaadka ee aan gacanta ku hayno si aan macluumaadka loo lumin, loo isticmaalin ama wax looga beddelin.
Ujeeddooyinka amniga goobta iyo si loo hubiyo in adeegyadeenna internetka ay u wada heli karaan dhammaan isticmaaleyaasha, waxaan u shaqaaleynaa barnaamijyo softiweer ah si aan ula socono taraafikada si loo ogaado iskudayada aan la oggoleyn ee ah in la soo dhejiyo ama la beddelo macluumaadka ama haddii kale waxyeello loo geysto. Haddii ay dhacdo baaritaanno sharci fulin idman oo la raacayo habsocod kasta oo sharci oo loo baahan yahay, macluumaadka laga helayo ilahaas ayaa loo isticmaali karaa in lagu caawiyo aqoonsiga shaqsi.
Badbaadada iyo Asturnaanta Bogga Carruurta
802Quits.org looma jeedin carruurta da'doodu ka yar tahay 18 sano, umana ururinayso macluumaadka shakhsiyeed carruurta. Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan asturnaanta carruurta guud ahaan, fadlan eeg Guddiga Ganacsiga ee Federaalka Sharciga Ilaalinta Asturnaanta Carruurta ee Internetka Bogga internetka.
Waxaan rajeyneynaa in waalidiinta iyo macallimiintu ay ku lug leeyihiin sahaminta internetka ee carruurta. Waxaa si gaar ah muhiim ugu ah waalidiinta inay hagaan carruurtooda marka carruurta laga codsado inay macluumaad shakhsiyeed ku bixiyaan khadka tooska ah.
802Quits.org ma bixiso ama iibiso alaab ama adeegyo ay iibsadaan carruurtu. Tan ugu muhiimsan, haddii ay dhacdo in carruurtu ay ku bixiyaan macluumaad iyada oo loo marayo websaydhka 802Quits.org, waxaa kaliya loo adeegsadaa si ay noogu suurogasho in aan uga jawaabno qoraaga, oo aan loo abuurin astaamaha carruurta
Waxaan dib u eegi karnaa siyaasaddan waqti ka waqti. Haddii aan sameyno wax isbeddel ah oo la taaban karo waxaan kugu soo wargelin doonaa adiga oo ku dhajinno ogeysiis caan ah bogaggayaga. Kani waa oraah siyaasadeed waana in aan loo turjumin qandaraas noocuu doono ha noqdee.
Macluumaad Dheeraad ah oo Ku Saabsan Badbaadinta Badbaadada
Guddiga Ganacsiga ee Federaalka Waxay bixisaa macluumaad muhiim ah oo ku saabsan badbaadinta badbaadada.
Waaxda Caafimaadka ee Vermont